Haweenka gobolka Banaadir oo deeq xoolo ah gaarsiiyay ciidamada Xooga dalka (dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 22, 2019 8:55 b 0
Haweenka gobolka banaadir ayaa deeq xoolo ah ku wareejiyay ciidamada Xooga dalka Soomaaliya ee kujira jiiida hore ee dagaalka.
Deeqdan ayaa ka koobneed laba neef oo Geel ah, Biyo, Timir iyo Buskud.
Haweenka ayaa sheegay in rajada shacabka ay jirto sidii ciidamada Soomaaliya ay u cirib tiri lahaayeen Argaxisada Al-shabaab.
waxa ay sheegeen in markasta ay ciidamada garab taagan yihiin haweenka gobolka banaadir.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa faah faahinaysa deeqdan iyo waxa ay ka kooban tahay.